Fifankaherezana sy fifanohanana ara-pahasalamana...
Mifankahery sy mifanohana rehefa misy zava-tsarotra hatrehina satria mahatsiaro fa matahotra, osa, tsy manana ny ampy. Ilaina ny mifankahery sy mifanohana ara-batana, ara-tsaina, indrindra ara-panahy. Manamafy izany ny hafatry ny Pape François ho an'ny andro manerantany faha-29 ho an'ny marary ny 11 febroary 2021 : iray ihany ny mpampianatra anareo, ary mpiraharaly avokoa ianareo rehetra. Ny fifandraisana am-pitokisana no fototra amin'ny fikarakaràna ny marary...
Laura Vicuña, Olontsambatra
I Laura Vicuña, Olontsambatra no tsaroana ny 22 janoary. Teraka tao Santiago (Chili) ny 05 aprily 1891 i Laura Carmen Vicuña. Miaramila ny rainy, mpanjaitra kosa ny reniny Mercedes Pino no anarany. Vao teraka kely i Laura dia tsy maintsy nifindra monina tany Temuco izy mianakavy.
Ny babakoto sy ny fambolen-kazo...
Cradec : Mila fiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ny tanora miasa na maniry hisehatra ao anatin'ny tetikasa fampandrosoana, isan'izany ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny tetikasa dia vahaolana amin'ny olana misy amin'ny faritra na fiaraha-monina izay lasa fitaovana. Ny babakoto na ny amboanala dia hita any amin'ny faritra Andapa, Maroantsetra, manampy amin'ny fambolen-kazo. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Manantantely faritra Anosy ny fambolen-kazo...
Hanova ny fiainan-tokatrano ny fanehoam-pitiavana eo amin' ny mpivady. (20-01-2021)
Pejy 1 amin'ny 110